Njengamanje, i-champagne yomshado iyisici esibalulekile salomcimbi obalulekile ekuphileni. Lesi siphuzo sewayini esidabukisayo sekuyisikhathi eside sithandwa ngabantu abaningi, futhi sesisengxenye yazo zonke izinhlobo zemikhosi nemicimbi ehlukahlukene ebalulekile. Vumelana ukuthi ucabanga ukuthi idili lomshado ngaphandle kwe-champagne kunzima kakhulu.
Amabhodlela ahlelwe kahle e-champagne awuphawu lomndeni oqinile kanye nothando phakathi kwabashade. Kuyathakazelisa ukuthi i-champagne ayivuliwe ngokushesha, kodwa ngemuva konyaka, ngosuku lomkhosi womshado noma ngemuva kokuzalwa komntwana wokuqala emndenini.
Ngakho-ke, ngenxa yokubaluleka kosuku lomshado, ukuklama komshado we-wedding champagne kuyisikhathi esibaluleke kakhulu ekulungiseleleni umkhosi. Isiphuzo sizobe sihlotshiswe kakhulu futhi siqale, sizobukeka sihle kakhulu etafuleni lezinsuku. Namuhla, kunezinketho eziningi zokugqoka amabhodlela, ukuthuthukiswa kobuchwepheshe obukhethekile kanye nezinto zokusebenza, futhi emadolobheni amakhulu ngisho namakhono amakilasi aphethwe ukuhlobisa lesi sici somshado.
Okuncane komlando we-champagne
Khumbula ukuthi igama elisemthethweni elithi "champagne" lingasetshenziswa kuphela kwiwayini langempela elikhazimulayo elikhiqizwa eFrance esifundeni saseChampagne. Lesi sifundazwe sisempumalanga yeParis futhi singenye yezindawo ezihamba phambili zewayini kuleli zwe.
I-Champagne yenziwe ngalezo zinhlobo zamagilebhisi: i-pinot ebomvu, i-chardonnay emhlophe ne-pinot encane. Ngokuvamile, lezi zinhlobo zihlangene kwesiphuzo esisodwa. Inqubo yokwenza i-champagne ihluke kancane ekukhiqizeni iwayini elikhazimulayo: lapha, ukunakwa okukhethekile kubhalwa ukugwema ukuthintana phakathi kwezinga elimnyama lamajikijolo nomsila wamagilebhisi. Lokhu kwenziwa ukwenza ukuphuza kuphuze. Ngokuqondene ne-champagne ebomvu, ithola umbala wayo ngokungeza iwayini elibomvu kusiphuzo . Ukuthandwa kwe-rose champagne kwenzeni iwayini le-premium.
I-champagne yomshado: kanjani ukwenza isinqumo esifanele?
Namuhla, singakwazi ukubona abakhiqizi be-champagne, abakhiqiza iwayini eliqhakazile kusukela ngekhulu le-18. Phakathi kwabakhiqizi abanjalo: Tettinger, Veive Clicquot, Perrier-Jouet, Mym m, Moet et Chandon, Louis Roederer kanye nabanye. Amawayini e-champagne ahlonishwa kakhulu, ngokulandelana, ashibhile.
Ukukhetha i-champagne emshadweni, kuqala kokubili umbhangqwana uqaphele intengo yayo. I-champagne kunezinhlobo eziningana zamanani eziyisisekelo - kusukela ezingabizi kakhulu kuya ezibizayo. Izindleko ezilinganiselwe zamabanga adumile e-champagne kusuka ku-40 kuya kuma-dollar angu-50 kwibhodlela elilodwa. Isibonelo, ibhodlela elilodwa le- champagne edumile i- Dom Perignon libiza ama-dollar angu-150 ngokulinganisa. Yikuphi u-champagne ongakhethayo kuxhomeke kuwe, into esemqoka ukukhetha ohlwini lwazo iziphuzo ezidumile, hhayi kusuka kulabo abakhulayo emashalofini ama-supermarket.
I-Wedding Champagne: Ukukhonza
Ukukhonza amawayini e-champagne kuthatha ukuba khona kwetafuleni lamagalasi amancane amancane angagcizelela ubuhle besiphuzo esiqhakazile. Amalazi akufanele abukeke nje ngokuhle, kodwa futhi abe nemfanelo ephezulu, avumela ukuthi isiphuzo sihlale sibanda isikhathi eside.
Namuhla, ngokuvamile emshadweni, ungahlangana nengilazi ebanzi, kepha ku-champagne enjalo izitsha ziyashesha kakhulu.
Bambalwa abantu abazi ukuthi i-champagne ikhiqizwa ezitsheni zezinhlobo ezahlukene, njengoba wonke umuntu ejwayele ubukhulu obujwayelekile bhodlela le-750 ml. Noma kunjalo, ungathenga ibhodlela le-champagne kusuka ku-375 ml kuya ku-15 amalitha. Futhi, konke kuxhomeke emakhono wezimali nesifiso somthengi.
Naphezu kokuthi i-champagne iyisiphuzo somshado esithandwa kakhulu, izindleko zayo eziphezulu zingaba nomthelela omkhulu ekukhethweni kwabashadayo esikhathini esizayo. Ngakho-ke, uma isabelomali sakho singakuvumeli ukuthi uthenge i-champagne ebiza kakhulu esuka eFrance, ungayithatha iwayini elikhazimulayo, kodwa futhi liyikhwalithi futhi lihle. Ngesikhathi esifanayo, ukuhlobisa i-champagne yomshado ngezandla zakho ngeke kube nzima - ukucabanga okuncane, futhi uzophumelela nakanjani!